Doorashadii Turkiga kadib: Akhriso 5 awood oo dheeri oo uu heli doono Erdogan - Caasimada Online
Home Dunida Doorashadii Turkiga kadib: Akhriso 5 awood oo dheeri oo uu heli doono...
Doorashadii Turkiga kadib: Akhriso 5 awood oo dheeri oo uu heli doono Erdogan
Ankaraca (Caasimadda Online) – Kadib guushii Recep Tayyip Erdogan oo mar kale loo doortay madaxweynaha Turkiga waxay ka dhigan tahay isbedel ka weyn kii hore inuu ka dhacay dalka Turkiga oo ah dalka ugu awoodda badan Bariga dhexe iyo mid ka mida dhaqaalaha soo koraya ee ugu horumarka sareeya ee dhaqaalaha adduunka.
Recep Tayyip Erdogan wuxuu markii labaad noqonayaa madaxweynaha dalka Turkiga, laakiin markan waa madaxweyne leh awood ballaaran, halka uu markii hore ahaa madaxweyne haya xil sharafeed oo awoodda inta badan ay gacanta ugu jirtay Baarlamaanka iyo golaha wasiirada.
Waxaa xusid muran ee afti dalka Tuykiga ka dhacday April 2017 in dalkaasi uu doortay nidaamka madaxweynaha iyadoo dastuur cusub loo codeeyay oo 51% dadka dalkaasi ay doorteen in Jamhuuriyadda Turkiga ay noqoto mid awoodda ugu sareysa uu leeyahay madaxweynaha.
Haddaba awooddaha uu leeyahay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo isbedelka Turkiga ka dhacay doorashadii 24 June kadib waxaa ka mida:
1- Inuu madaxweynaha si toos ah u magacaabi karo madaxda sare ee dowladda oo ay ku jiraan wasiirada iyo madaxweyne ku xigeenada.
2- Inuu awood u leeyahay joojinta iyo faragelinta nidaamka Garsoorka ee dalkaasi.
3- Inuu dalka Turkiga ku soo rogi karo xaalad degdeg ah.
4- Inuu kala diri karo Baarlamaanka, kuna dhawaaqi karo doorashooyin hordhac ah
5- Inuu meesha ka baxayo xilka Ra’iisal wasaaraha.
Mucaaradka Turkiga iyo dalalka Reer Galbeedka ayaa ku doodaya in Recep Tayyip Erdogan uu isu bedelayo keligii taliye, inkastoo uu doorasho ku yimid, waxaana loogu magac daray SULDAAN oo ah magac ay lahaayeen madaxdii Khilaafadii Cusmaaniyiinta.